Chelsea oo Kulankii London derby Ka Badisay Tottenham iyo Man City iyo Arsenal oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Chelsea ayaa kulankii London derby garoonkeeda Stamford Bridge 3-0 uga badisay kooxda Tottenham.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard.
Ciyaaryahan Didier Drogba ayaa daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Loic Remy ayaa daqiiqadii 73-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku hogaamineyso 36-dhibcood,halka kooxda Tottenham ay ku jirto kaalinta tobanaad ee horyaalka,iyadoo leh 20-dhibcood.
Kooxda Sunderland ayaa waxaa garoonkeeda Stadium of Light 1-4 uga badiyay kooxda Manchester City.
Kooxda Sunderland ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Connor Wickham.
Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa daqiiqadii 21-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Stevan Jovetic ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Pablo Zabaleta ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta goolka afaraad u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 14-gool ku hogaaminayo gool dhalinta horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga.
Kooxda Manchester City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta labaad,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 14-dhibcood.
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium 1-0 uga badisay kooxda Southampton.
Kooxda Arsenal ayaa ka faa’ideysatay dhaawac kooxda Southampton ka soo gaarayToby Alderweireld,ka dib markii ay kooxda sameeysay sedaxdii bedel ee loogu tala galay.
Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka kooxda Southampton ay ku jirto kaalinta sedaxaad ee horyaalka,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda Everton ayaa garoonkeeda Goodison Park barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Hull City.
Kooxda Everton ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 34-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Romelu Lukaku,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Sone Aluko ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Hull City.
Kooxda Everton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 18-dhibcood,halka kooxda Hull City ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 12-dhibcood.